Badbaadiyaha Badbaadada, Qalabka Badbaadinta ee Badbaadinta, Ilaalinta Badbaadinta - Thor
Ulaha danabku waa qayb ka mid ah nidaamka ilaalinta hillaaca. Ulaha danabku wuxuu u baahan yahay isku xirnaan xagga dhulka ah si uu u guto shaqadiisa ilaalinta.
Waxaan kaliya diirada saareynaa wax soo saarka, R&D, naqshadeynta iyo iibinta SPDs.
Bixinta adeegyada OEM iyo ODM
Xullo oo Qalabee SPD Sax ah si aad uga ilaaliso qalabkaaga danab hillaaca.
Hordhaca badeecada TRS-B ...
Hordhaca badeecada TRS-C ...
Hordhaca badeecada TRS-D ...
Hordhaca badeecada TRS9 ...
Hordhaca alaabada THOR ...
TRSS-DB9 Serial Port Signal Badbaadinta Xannibaade Prot ...
Hordhaca alaabta ...
Waxaa lagu daray 2006, Thor Electric Co., Ltd. waxay dhistay wax kasta si ay u bixiso noocyo badan oo hal abuur leh oo lagu kalsoonaan karo iyo xalalka ilaalinta.